Nainghtoonoo's Page - Myanmar Network
Started this discussion. Last reply by hnin ei Jan 23, 2013.4Replies 10 Likes
ကျန်းမာရေး အတိုအထွာ ဗဟုသုတ
Started this discussion. Last reply by Yin Min Myint Z∂w Jan 5, 2013. 1 Reply5Likes
ကျမ်းမာရေး အတိုအထွာ ဗဟုသုတများShared by ရွှေတည်…Continue
ခွေးရူးရောဂါ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ခွေးရူးရောဂါအကြောင်းPublished on Wednesday, 12 December 2012 09:43 Written by မောင်အောင် (မွေး/ကု)ခွေးရူးရောဂါသည် ကမ္ဘာ့လူသားတစ်ရပ်လုံးအား ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာတွင် ဆယ်မိနစ်လျှင် တစ်ယောက်နှုန်း…Continue
Started this discussion. Last reply by AshinDamahar Nanda Jun 14, 2015. 1 Reply2Likes
သင်သိဖို့ လိုအပ်မည့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော ဥပဒေ ၅ ချက် ၁။ အင်္ဂလိပ် grammar ကို အများကြီး မလေ့လာပါနှင့်။ ဒီအချက်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူတွေအတွက် ထူးဆန်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ် စကားပြောရာမှာ အရေးအကြီးဆုံး…Continue
Nainghtoonoo has not received any gifts yet
At 21:23 on May 13, 2011,
At 21:07 on March 8, 2010, YGN-paohlay said…
hi brother ;
you and me play with chesemaster . :)